मलाई बन्नु छैन किसान! – मेलोमेसो
मलाई बन्नु छैन किसान!
२०७८-०३-१९ १२:४७ मा प्रकाशित
गाउँमा घर अगाडि ठूल्ठूला मिलेका गराहरु छन् । फुटबल खेलाउने मैदान जत्रा । सिचाइँ गर्न नि पर्याप्तै छ पानीको सुविधा । दुई चार वटा टनेल बनाएर गोलभेडा, सिमी, काउली बन्दा फलाउने रहर नजागेको हैन मनमा ।
गाउँको त अर्गानिक जीनिस पो हो त । शहरका लागि रुचाउँछन् अर्गानिक । सपना बुनेको थिए, उत्पादन गर्ने अनि शहर पु¥याएर बेच्ने । आम्दानी गर्ने । गाउँले जीवन जिउने । यसका लागि सहजकर्ता नभएका हैनन् गाउँमा ।
गाउँमै सहकारी छ । हप्तामा कुनै निश्चित दिनहरु छुट्याएर गाउँभरका किसानका तरकारी उठाउँछन् अनि शहर पु¥याउँछन् गाडीमा । तर अति न्युन मूल्यमा । बिचौलियाहरुको बिगबिगी उस्तै छ । संस्थाको कर्मचारीहरुको तलब, गाडी भाडा, अतिरिक्त शुल्क, के के जाति घटाएर किसानको हातमा किलाको एक अंकको पैसा, जबकि तीन अंकको मूल्य बजारमा हुन्छ, त्यही तरकारीको ।
नाफाको त कुरै छोडम, पसिनामो मूल्य पनि उठ्दैन किसानको । अनि केका लागि घोट्याउने हाड र छाला?
लकडाउनले यसपालि असार पस्ने मौका जु¥यो । मस्त लकडाउनमा निदाइरहेको यताको शहर अनि उता चलायमान गाउँ । गाउँमा के को लकडाउन, के को बन्दाबन्दी । घरभित्रै बसेर कहाँ पुग्दो हो र गाउँमा ? घाम र पानीले जब्बर बनाइसकेको छ गाउँलेका शरीरलाई । तर उस्तै नरम र कोमल हृदयका धनी ।
पिढींमा बसेर चियाको चुस्कीसँगै ९६ वर्षीय हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो, ‘उ पारि पारि वनहरु छन् नि त्यहाँ हामी बैैस छदा धान रोप्थ्यौं । पुराका पुरा बीस हलको मेला । तीन चार घरका मिलेर परेली लगाउँथ्यौं । हिलो फालेर गोरुलाई नुहाईधुवाई गरेर घर फर्कदा त साउन छुन्थ्यो । अहिले हेर, सबै उत्तीसै उत्तीसको वनले ढाकिदियो । दिउँसै तर्साउला जस्तो वन बनि गो ।
पैसा के अलिकति कमायो, मान्छेहरु सुखभोगी भए । सक्नेहरु शहर बसे, नसक्नेहरु गाउँमै बजारबाट बोरा घिसारेर खान थाले । शरीर पछारेर दिन काट्न थाले । दुःख कसलाई गर्न मन लाग्छ र ? हाम्रो जमिनले सराप्छ बाबु, यसरी त । धिक्कार्छ हामीलाई पुर्खाले । बाउबाजेका छालालाई जंगल बनायौं हामीले।’
यो मेरा हजुरबाका गुनासाहरु मात्र थिएनन्, गाउँको तितो यर्थाथ यहीँ नै थियो । वास्तविकता थियो गाउँको । सित्तैमा कमाएर खाऊ, भन्दा पनि खेतीपाती गर्ने मान्छे छैनन् गाउँमा । मान्छेले दुःख गर्न छाडे । फेरि किसानी पेशालाई दुखी पेशा भन्न नमिली हाल्ला । यसैमा रमाइरहेका कैयौं किसानहरु पनि छन् नि ।
यता फेरि शहर पसेका त्यही मान्छेहरुले के वास्तवमै सुख मिलेका छन् । डिप्रेसनको शिकार, फ्रस्टेसन आदि हुनेहरु त्यही सुखका भोगीहरु न हुन् ।
किसान बन्न त्यति सजिलो पनि कहाँ छ र ? वर्षभरि घाम, पानी, हावाहुरीसँग पौठेजोरी जो खेल्नुपर्छ । घाममा डढिन सक्नुपर्छ अनि सिक्नुपर्छ वर्षाभरि रुज्न । त्यसै फल्छ र कोदो ? त्यसै झुल्छ र धानका बालाहरु ? त्यसै फूल्छन् र किसानका खुसीका फूलहरु । तर आफ्नै मिहिनेतको फलमा मस्त रमाउँछन् । न कसैको लोभ लालच न कसैलाई छलकपट । निश्चल मन हुन्छ किसानका ।
यसपाल मज्जाले वर्षा भयो असारमा । किसानहरुको मनमा खुसी छायो । मिमिर्रे मै खेत पुग्थे, अनि फर्कन्थे झिस्मिसे साँझमा घर । यो नै दैनिकी थियो, दिनभर खेतमै । सेखु ओढेर दिनभर खनजोत र धान रोप्दा ढाड कटक्कै दुख्दो हो । दिनभर हिलो भित्रै रहिरहन त्यति सहज त कहाँ हुन्थ्यो र? तर यसैमा रमाउँछन् किसानहरु । खुसी हुन्छन् ।
न किसानलाई चाहिँदा धानका बिउँहरु पाउँछन् न त खेतमा हाल्ने मल नै । बंगालदेशबाट मल ल्याउँदाको तितो कहानी त सबैलाई थाहा नै छ । परेको मूल्यमा मल किन्न चाहँदा पनि पाउँदैनन् किसानहरु । बाढी पहिरोले खेत बगाउँदा होस् वा घरभित्र धान भित्र्याउन लाग्दा असिनाले धान झार्दा, खै राहत किसानलाई । खै किसानलाई सहानुभूति र साथ । किसान सधैं सबैले हेप्छन् । सबैबाट हेपिन्छन् ।
कसले सम्मान भाव प्रकट गरेको छ र किसानलाई ? कसले दिएको छ किसानको पसिनाको मूल्य? बिहान बेलुका छाक टार्न डोकोमा तरकारी बोकेर हिड्ने बुढी आमासँग बार्गेनिङ गर्छन् पाँच दश रुपैँयाका लागि, चिल्ला कारमा हुइकिनेहरु । त्यही धनाढ्य तारे होटलमा सय र हजारका नोट टिप्स दिँदा आफैंलाई मै हुँ भन्ने दम्भ पाल्दछ । खेतबारीमा काम गर्ने पटपट फुटेका हातखुट्टा देख्दा घिन मान्नेहरु कृषि क्रान्ति भन्दै तारे होटलहरुमा सेमिनार र बेभिनारमा डलर पचाउँछन् । हिलो छुन घिन मान्नेहरु कालो चस्मा र तडकभडकका साथ हिलो पस्छन् । उल्टै किसानको धज्जी उडाउँछन् ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या खेतीमै लाग्दा पनि किन वर्षेनी करोडौंको धान आयातित हुन्छ त ? किन बाहिरिन्छ अर्बौ अर्बौ नेपाली पैसा कोदो, गहुँ र भटमासका लागि ? शहरमा रहेका फाँटहरु दलालले प्लटिङ गरिसके । यो जग्गा बिक्रीमा छ, भन्ने बोर्डकै बिगबिगी हुन्छ जताततै ।
फाँट मात्र टुक्राटुक्रा पारेनन्, सँगै टुक्रिए खेती गर्ने किसानका मन पनि । मुरीका मुरी धान फल्ने फाँटमा पैसा फलाउन थाले प्लटिङ गरेर । कंक्रिटका बिल्डिङहरु ठडाए, अनि बन्यो बिल्डिङ जस्तै कंक्रिट मनहरुको शहर । मानवता हराएको शहर । संवेदनशीलता बेगर शहर । किसानलाई होच्याउने शहर।
नेपालमा हिलो छुन घिन मान्छन् । त्यही मान्छे ईपीएसबाट कोरिया पुग्छन्, ठूल्ठूला सपना बोकेर । अनि बिहानदेखि रातिसम्म १६ घण्टे फार्ममा खटिन्छन् । तरकारी खेतमा घोटिन्छन् । गोरुझैं जोतिन पर्छ खेतमा तर उसलाई कहिल्यै चेत पलाउँदैन्, यतिको मिहिनेत र परिश्रम गर्दो हो त आफ्नै देशैमा फल्दो हो धान। फल्दो पो पैसा खेतैमा । बेकार अर्काको देशमा भनाई र कैयौं हन्डर खाएर त्यही खेतैमा काम गर्ने ? खै कहिले लाग्दो हो, त्यस्ताका घैटोमा घाम।
गरिबले खाए मकै, धनाढ्यले खाए पप कन। गरिबले गरे होच्याएर किसान भन्छन्, त्यही हुनेखानेले गरे कौसी खेती। गरिबले खाए भुटेको भात, धनीले खाए फ्राइ राइस। विदेशमा गाईवस्तु चराउनेलाई सम्मान साथ काउब्याइ भन्दछन्, यहाँ नेपालमा हियाएर, होच्याएर गोठाला भन्छन्। जबसम्म हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म देशमा कृषि क्रान्ति सम्भव हुँदैन। जबसम्म किसानले सम्मान पाउँदैनन्, तबसम्म घिसारिरहनु पर्छ विदेशबाट आयतित महंगो चामलका बोराहरु।
गाउँ जाँदा घरकाले भन्छन्, ‘गाउँमै खेतीपाती, तरकारी फलाएर पैसा कमाउन सकिन्छ। मिहिनेत गरे यहीँ सुन फल्छ।’ अनि यी यावत तीता यर्थाथहरु झल्यास्स सम्झिन्छु। अनि जवाफ फर्काउछु, ‘मलाई किसान बन्नु छैन ।’